စိုက်ပျိုးရေးကမ္ဘာ၏အောက်စဘရစ် CIRENCESTER မှကြိုဆိုပါ၏ - သတင်း
စိုက်ပျိုးရေးကမ္ဘာ၏အောက်စဘရစ် Cirencester မှကြိုဆိုပါ၏
၁၈၄၅ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးတော်ဝင်စိုက်ပျိုးရေးကောလိပ်သည်နိုင်ငံတကာတွင်ကျော်ကြားသောစိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယခု ၂၀၁၃ တွင်တက္ကသိုလ်အဆင့်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သောတော်ဝင်စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်ကိုကျေးလက်ဒေသ၏အောက်စ်ဘရစ်အဖြစ်ရည်ညွှန်းလေ့ရှိပြီး Jonathan Dimbleby၊ Sir Henry Cecil နှင့် Captain Mark Phillips တို့သည်ကျော်ကြားသောကျောင်းသားဟောင်းများနေထိုင်ရာနေရာဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်စကားပြောကမ္ဘာတွင်ပထမဆုံးစိုက်ပျိုးရေးကောလိပ်ဖြစ်သည့်အတွက်၎င်းသည်အမွေအနှစ်များနှင့်အတူတကွပူးပေါင်းသည့်အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည်။
အပြင်လူတွေအနေနဲ့လိင်၊ အရှုပ်တော်ပုံ၊ သို့သော်မည်သူမဆိုကျွန်ုပ်တို့ချစ်သော Cotswold uni ၏တကယ့်အတွင်းပိုင်းဇာတ်လမ်းကိုတကယ်နားထောင်ခဲ့ပါသလား။ Ciren အိပ်မက်ကိုနေထိုင်ခဲ့သည့်ကျောင်းသားဟောင်းများမှသင်အမှန်တရားကိုအားလုံးကြားရသည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ Bledisloe မြက်ခင်းပေါ်နေသာနေ့လည်ခင်းမှသည် The Rock ဖြစ်သည့်မြင့်မြတ်သော shit တွင်း၌ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညအထိအရာအားလုံး။
သူကသူကတဆင့်နှင့်မှတဆင့်သူတစ် ဦး piss အိုးင်သူအရက်သမားင်သူကသူကတက်ရရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်သူကတက်ရရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်သူကတစ်ချိန်က piss အိုးင်သူစစ်မှန်တဲ့အပြာရဲ့ Ciren ကနေပါပဲဒါပေမယ့်သူကဆင်း, ဆင်းအောက်ဆင်းအခြားလမ်းသွားလေ၏။
ငါ့သူငယ်ချင်းနှင့်ငါ Bledisloe မြက်ခင်းပေါ်
တော်ဝင်စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်အကြောင်းကိုမင်းစဉ်းစားတဲ့အခါမင်းဘာပုံဖော်မလဲ။ ကိုယ်ကျင့်တရားချို့တဲ့သောကလေးငယ်များသည်ငွေစက္ကူများနှင့်ပြည့်နှက်နေပြီးဘုန်းကြီးသောအိမ်များကိုအမွေခံရန်ကြံစည်နေသလော။ ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်လယ်ယာကဏ္ heritage ရဲ့အနာဂတ်လား။ Cirencester သည်ထိုသို့သွားသောလူအမျိုးအစားနှင့် ပတ်သက်၍ ထူးခြားစွာရောနှောထားသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများပါရှိသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ကျပုံစံရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်သွားဘယ်နေရာမှာမရှိကြသလော RAU ကိုရွေးချယ်ရန်အနည်းငယ်လွယ်ကူသည်။ ဒါကြောင့်မကြာသေးမီကမှရရှိလာတဲ့အနုတ်လက္ခဏာပုံနှိပ်ခြင်း၏ပမာဏကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ၊ သင်သည်အခြားမျက်နှာပြင်များကိုခြစ်ရာချခြင်းဖြင့်သင်အမှန်တကယ်မည်သည့်အရာကိုရှာတွေ့နိုင်သည်ကိုသင်ပြပါလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်ဘ ၀ တစ်လျှောက်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှု၊ ပျော်စရာနှင့်မယုံနိုင်စရာအမှတ်တရများဖြစ်သည်။
နုပျိုသောအသက်အရွယ်မှ စ၍ ကျွန်ုပ်ဘယ်ကို ဦး တည်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်၏မိဘများသိသည်။ ငါမြင်းအရူးဖြစ်၏, ဆိုးခြင်းနှင့်အမဲလိုက်သွားကျောင်းကိုခုန်ကြ၏။ ငါ RAU အဘို့အလတ်ခဲ့သည်။
ဒါနဲ့နေ့လယ်မှာတော်ဝင်စိုက်ပျိုးရေးတက္ကသိုလ်ကိုကျွန်တော်သွားခဲ့တယ်။ Wellington Boot key Ring၊ ဘီယာဖျာနှင့်လက်ပတ်ကြိုးတစ်ချောင်းတပ်ဆင်ထားသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏အခန်းများ၌စနစ်တကျစီစဉ်ထားသော starter-pack နှင့်အတူကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ Cotswolds ရှိတစ်ခုတည်းသောနိုက်ကလပ် - The Rock (စျေးဝယ်စင်တာငယ်တစ်ခုအထက်တွင်တည်ရှိသည်။ တစ်လှောင်အိမ်ထဲမှာတိုင်) ။ နောက်လှည့်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် starter pack မှာဖျားနာတဲ့အိတ်၊ ကွန်ဒုံးနဲ့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်တို့ပါသင့်တယ်။
သငျသညျစိတ်ကူးတစ်ခုပေးရန်, ငါတို့လတ်ဆတ်တဲ့စတင်သိုးရေမှုန်ရေမွှားနှင့်ယိုစိမ့်တစ်ပိုင့်ကျဆင်းနေခံရနေစဉ်, beagle ရဲ့ညစာစား၏ကောလိပ်ရဲ့ဒေသခံထုပ်ပိုးထဲမှာမျက်နှာကိုဆင်းခံရခြင်း၏စုစည်းအတားအဆီးသင်တန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါနောက်မှငါ့အမြင်းကလပ် Jumper ဘင်ခဲ့ရတယ်ဆိုပါစို့။
ရောက်သောအခါ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုကျောင်းသားများကကျွန်တော်တို့ကိုခန်းမများထဲတွင်ထည့်ထားသောရေနွေးအိုးကို ၁၀ ခုတွင် ၉ ဆမသုံးရန်တင်းကြပ်စွာတိုက်တွန်းခဲ့သည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်က၎င်းတို့ကို pissed လိမ့်မည်။ သို့သျောလညျး, ငါတို့အိပ်ခန်းကနေကျေးလက်ကိုဖြတ်ပြီးအချို့တော်တော်ရယ်စရာအမြင်များကိုပြု၏။ အကယ်၍ သင်ကနံနက်စာစားရန်လုပ်ခဲ့လျှင်၊ ကျောင်းဝင်းရှိထမင်းစားခန်းသည်ဂုဏ်ပြုကျောင်းသားများစာရင်းနှင့်နံရံကိုအလှဆင်ထားသည့်နံရံများနှင့် Nutella mini mini packets များ၏အဆုံးမဲ့ထောက်ပံ့မှုများဖြစ်သည်။
တခြားသူတွေလိုပဲငါဟာလတ်ဆတ်တဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကိုရဖို့တကယ်တောက်ပတဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုလို့ထင်ခဲ့တယ်။ Ludo, Husky-Cross-Collie သည်ကျွန်ုပ်၏ Ciren ၌ကျန်ရှိနေသေးသော ၂ နှစ်တာကာလအတွက်ကျွန်ုပ်၏အနားတွင်မှီဝဲခဲ့သည် - သူသည်ရော့ခ်မှပြန်လာသောအရက်မူးနေသောပခုံးများစွာကိုခံရပ်ခဲ့ရသည်။
မင်းနဲ့ငါနေထိုင်တဲ့မတူကွဲပြားတဲ့သတ္တဝါတွေကိုစိတ်ကူးတစ်ခုပေးဖို့၊ တတိယနှစ်မှာတော့အခြားမိန်းကလေးသုံး ဦး၊ ခွေးနှစ်ကောင်၊ ယုန်တစ်ကောင် (သူမရဲ့ကလေးသုံးကောင်) နှင့်ကျားကောင်နှစ်ကောင်နှင့်အတူအိမ်တစ်အိမ်၌ရှိနေခဲ့သည်။ ၎င်းသည်လုံးဝပုံမှန်ဖြစ်သည်ဟုယူမှတ်သည်။ ငါသည်လည်းတစ်ချိန်ကတက္ကသိုလ်တည်ငြိမ်မှာလမ်းတက်မြင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ယုန်တစ်ကောင်သည်ခွေးတစ်ကောင်မှစားသုံးလိုက်သောအခါမတော်တဆမှုအနည်းငယ်ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်အခြားမိသားစုများကပျော်ရွှင်သောမိသားစုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ညနေခင်းကိုထင်းမီးဖိုပေါ်မှာငါတို့ကြက်ဥကြော်တွေသုံးလေ့ရှိတယ် - Ciren မှာအချက်ပြမှုကမကောင်းဘူး၊ ဒါကြောင့် Facebook နဲ့ Instagram ကိုဖြတ်ပြီးအချိန်မပေးနိုင်ဘူး။
Ponies, Tractors နှင့် Pheasants လိုမျိုး module တွေပါတဲ့သင်တန်းတွေပေးတဲ့တက္ကသိုလ်တော်တော်များများမရှိပါဘူး။ အိုကေ၊ ဒါဆိုသူတို့ဟာသူတို့ထက်အသံကပိုပြီးရှုပ်ထွေးတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ့သူငယ်ချင်းကသူမဝိုင်စက်မှုလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခံရတဲ့အချိန်ကနေပြုတ်ထွက်သွားပြီးနောက်မျက်နှာမှာတော်တော်လေးနီနေတယ်ဆိုတာငါမှတ်မိသေးတယ်။
ကျွန်ုပ်၏သင်တန်းမှာ BSc (Hons) International Equine & စိုက်ပျိုးရေးစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုမြင်း - သင်တန်းအဖြစ်လှောင်ပြောင်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်နောက်ဆုံးနှစ်မှာ Kentucky ကိုသွားတာမျိုးဟာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးစဉ်ပဲ။ ငါအမေရိကန်ပြိုင်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုအများကြီး၏ငရဲလေ့လာသင်ယူ, ငါသည်လည်း bourbon ထက်အခြားဘာမှနှင့်အတူအခြားဘာမှနှင့်အတူအလွန်လျင်မြန်စွာတော်တော်လေးလျင်မြန်စွာတက်ခူးအလွန်အရေးကြီးပါသည်။
Ciren တွင်အဆင့်ဆင့်သည်ဥပဒေဖြစ်သည်။ လတ်ဆတ်သောလတ်ဆတ်သူများမှာအောက်ခြေမှအစာကျွေးသူများဖြစ်ပြီးတတိယနှစ်တွင်ဘုရားသခင်အားစွမ်းအားများပေးသည်ဟုယူမှတ်ကြသည်။ ငါလတ်ဆတ်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်ပြီးနောက်ငါ့ကိုလုံးဝပိုင်နိုင်စွာမတိုင်မီမိန်းကလေးတစ်ယောက်သည်ကျွန်ုပ်မည်သည့်နှစ်တွင်ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိနေသည်ကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။ သူမကျွန်တော့်ကိုကြည့်တဲ့ပုံစံကြောင့်သူမထက်တစ်နှစ်ပြည့်တဲ့ငယ်ငယ်တုန်းကတောင်းပန်ဖို့နီးပါးကျိန်ဆိုခဲ့တယ်။
သင်အမှန်တကယ်လိုချင်ပါက Cirencester သည်ဘော်ဒါကျောင်းအနည်းငယ်သာရှိသည်ဟုပြောခြင်းသည်မျှတလိမ့်မည်။ ငါတွေ့ခဲ့သည့်ဇာတ်ကောင်များမှာသီးခြားအမျိုးအစားငါးမျိုးကျသည်။
၁ ။ BNOC: Ciren မှ BNOC သည်အထက်ဖော်ပြပါနှစ်တွင်မောင်နှမများရှိခဲ့ဖူးပြီး၊ ဘောင်းဘီအနီများကို ၀ တ်ဆင်ကာတံဆိပ်တုံးဆင်ထားသည်။ အိမ်ထောင်ဖက်အများကြီးပြောခဲ့သည်။
နှစ်။ Hedgehog: စတင်နှင့်အရက်သောက်ခြင်း၏အလွန်အမင်းဒေါသထွက်နေတဲ့ညခဲ့အရက်သောက်ရပ်ဘီဘောလုံးကလပ်။ တက္ကသိုလ်၏ 2% ကိုအစဉ်အဆက်ဖိတ်ကြားခဲ့သည်, အများကြီးလျော့နည်းလက်ခံခဲ့သည်ခဲ့သည်။
၃ ။ အိုမင်းခြင်း - လူတွေကသူတို့ RAU နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ထင်နေတာကိုး။ သူတို့သည် Reg တွင်ပါတီမူးယစ်ဆေးဝါးများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေပြီးတောက်ပသောဗုံးကြဲလေယာဉ်အကျီများနှင့်လေအိတ်များဝတ်ဆင်ထားပုံရသည်။
လေး။ လယ်သမား: Shoffel, သံမဏိခြေချောင်း ဦး ထုပ်ဖိနပ်။
၅ ။ ငါအရင်ကသူတို့ကိုမတွေ့ဖူးဘူးကျိန်ဆို: တတိယနှစ်တွင်မည်သည့်နေရာမှမျှပေါ်ထွက်လာခြင်းမရှိသောကြောင့်သင့်အားသူတို့ဤအချိန်အားလုံးမည်သည့်ငရဲသို့ရောက်နေသည်ကိုသင်စဉ်းစားနေသည်။
RAU တွင်လူမှုရေးအချက်အချာသုံးခုရှိသည်။ The Tythe Barn, ကျောက်နှင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအင်း။ ကျေးလက်ဒေသအလယ်ပိုင်းတွင်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှုဖြစ်ခြင်းကညမှောင်ထွက်ချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအနည်းငယ်ကန့်သတ်ထားသည်။ သို့သော်ထိုအရာသည်အလွန်ထူးခြားစေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
Tythe သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်အရောင်းဆိုင်ဖြစ်ပြီးညတိုင်းကျောင်းဝင်း၏ဗဟိုတွင်တည်ရှိသည်။ အကယ်၍ သင်သည်မြွေကိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်အနက်ရောင် cider ထက်အခြားမည်သည့်အရာကိုမဆိုသောက်ပါကအလွန်ထူးဆန်းသည်။ Tythe သည်ထူးဆန်း။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောလူမှုရေးပွဲများကျင်းပခဲ့သည်။ အနည်းငယ်သာပြောရလျှင်ချစ်ရသူအမျိုးသား Stripper Deano သည် RAG ရက်သတ္တပတ်နှစ်ပတ်လည်ပတ်မှု၊ လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားသော Bavarian Bavarian နှင့်မိန်းကလေးများ၏ကြိုးများအတွင်း၌ဖြစ်ပွားခဲ့သောရက်ပ်တိုက်ပွဲများ (ယောက်ျားလေးများဟုတ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သွားရခြင်းဖြစ်သည်) အားလုံးအတွက်) ။
အဆိုပါကျောက်အတော်လေးဖြစ်နိုင်သည်ငါအစဉ်အမြဲငါအရမ်းဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့အလတ်ဆတ်ဆုံးနိုက်ကလပ်ဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါကြောင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏အဆိုးဆုံးနိုက်ကလပ်နှင့်အတူတက်အဲဒီမှာဖြစ်ကောလဟာလသတင်းများအရခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည် Cirencester ရှိကျွန်ုပ်တို့အချစ်ဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့သည်။ VKs မှသကြားဓာတ်မြင့်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်သည့်inရိယာတွင်သင်၏ညလုံးအချိန်ဖြုန်းခြင်းနှင့်ထိပ်တန်းဇယားကွက်များပေါ်၌ကခုန်ခြင်းတို့ထက်ပျော်စရာကောင်းသောအချိန်ကာလများကိုဘာမှမအော်ဟစ်ပါ။
ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းသည်အိမ်နီးချင်း Coates ကျေးရွာတွင်တည်ရှိသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုနေရာတွင်သင်သည်ဒေသခံများထံမှကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသော scowls များနှင့်အစဉ်အမြဲအကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးဒိန်ခဲများရရှိခဲ့သည်။ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းညများသည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ကြာသပတေးနေ့တိုင်းငါတို့ရှိသမျှသည်အရက်ဆိုင်ဘေးရှိသေးငယ်သော function ကျီကိုစုဝေးကြသည်။ (ကျွန်ုပ်သည်မနေနိုင်တော့ပါ။ TINY ဖြစ်သည်) - အမြဲတမ်းရွာသွန်းသည်၊ ဒေသခံအရည်အချင်းရှိ DJ တစ်ယောက်ရှိခဲ့သည်။ ဘားသည်ကြမ်းပြင်ထက်စတစ်ကာကပ်နေသည်။ ကျနော်တို့ကချစ်သောကြောင့်အထူးပြုလုပ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အကယ်၍ သင်သည်ဘား ၀ န်ထမ်းများနှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်ရန်ကံကောင်းသူဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ တုန်လှုပ်စေသော! ကျနော်တို့တကယ်ပူဖောင်းမှထွက်ခွာသွားပြီး Badminton (သို့) Cheltenham ကိုသာသွားခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့်မေးခွန်းထုတ်စရာက RAU ကျောင်းသားတွေကိုဘာလို့ arseholes လို့ခေါ်တာလဲ။ ရက်စက်စွာရိုးသားကြပါစို့, သူတို့ထဲကအချို့ပဲ arsehole + Ciren ကျောင်းသား = မီးမှလောင်စာဖြစ်ကြသည်။ Ciren ကျောင်းသားများသည်ဤဆိုးရွားသည့်ပုံရိပ်ကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးတက္ကသိုလ်ကိုယ်နှိုက်ကရှမ်ပိန်ပုံပန်းသဏ္withာန်ရှိသောပူဖောင်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။
RAU ကိုယ်တိုင် Cirencester မြို့နှင့်ပိုမိုပေါင်းစပ်ရန်လိုအပ်သည် ကျောင်းသားများသည်ဒေသခံများနှင့်ပိုမိုပေါင်းစည်းလေလေ၊ ကျောင်းသားအများစုသည်ဖော်ရွေ၊ အထောက်အကူဖြစ်စေ၊ အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်းအချက်ကိုဖော်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်အမည်းစက်များပြိုကွဲလေလေဖြစ်မည်။ အားလုံးမဟုတ်ဘူး pricks ။
ကျောင်းဆင်းပွဲနောက်ဆုံးတွင် (ကျွန်ုပ်တို့အချို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပုံကိုကျွန်ုပ်တကယ်မသိခဲ့ပါ) ရောက်သောအခါလူတိုင်း၏မိဘများသည်အမှန်တကယ်ပင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်။ သင်သည်သင်၏ဆုတ်ဆိုင်းဆံပင်ကိုရသည့်နေရာဖြစ်သည်။ ဒါမှမဟုတ်အိုးငါ့ဘုရားဒါ -and ဒါဖေဖေ FIT ဖြစ်ပါတယ်! ။ ဒါဟာသူတို့ကိုငါ befores နှင့်အဟောင်းကောင်လေးဖခင်အခမဲ့ရှမ်ပိန်အလွဲသုံးစားမှုကြောင့်ညစာစားရန်လည်း sloshed ဖြစ်လာနေဖြင့်၎င်းတို့၏ Ciren လူငယ်ပြန်လည်အသက်ရှင်ရန်ကြိုးစားနေဖူးဘူးငါကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုနှင့်အတူယေဘုယျ ဦး ထုပ်ပစ်အပြည့်အဝတစ်ရက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
သဘာဝအားဖြင့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ထိုတိုင်ကိုနောက်ဆုံးလှည့်စားရန်နှင့်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး မည်မျှချစ်ကြောင်းအချင်းချင်းပြောပြရန်ကျောက်သို့သွားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည် (bla bla bla!) ငါ Cirencester ၌ငါ့အချိန်ကိုတကယ်ကြိုက်ခဲ့သည် မင်းအရင်နှစ်တွေရဲ့ကျောင်းဆင်းပွဲကိုကြည့်ပြီးမင်းဒီကိုရောက်တော့မယ်ဆိုတာမင်းဘယ်တော့မှစိတ်ကူးမထားဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကဒီအရာအားလုံးပြီးဆုံးသွားတာကိုမတွေ့ရလို့ပါ။ ဒါပေမယ့်ငါတို့အားလုံးဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကထွက်သွားခဲ့ကြတာပဲ။ က။ ကျေးဇူးပြု။
Ciren ပြီးနောက်ဘဝနှင့် ပတ်သက်၍ သင် Cotswolds မှ Ciren ကျောင်းသားဟောင်းကိုရှာဖွေနေပါက SW6 areaရိယာကိုပုံမှန်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
အားလုံးပြောနှင့်ပြုသောအမှုသောအခါ, Cirencester ရုံတက္ကသိုလ်မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါကကျွန်မရဲ့အိမ်ကနေအိမ်ပြန်လာပြီးကျွန်တော့်နှလုံးသားထဲမှာအထူးနေရာတစ်ခုရခဲ့တယ်။